August 2021 - Celebrity Corner
ရည်းစားဟောင်း ရဲရင့်အောင်နဲ့ လမ်းခွဲလိုက်တဲ့ အံ့ဩဖွယ်အကြောင်းကိုပြောပြလာတဲ့ ဧငြိမ်းဖြူ
Celebrity Corner | 31/08/2021
သူမသေလောက်အောင်ချစ်ရတဲ့ ရည်းစားဟောင်း အဆိုတော်ရဲရင့်အောင်နဲ့ လမ်းခွဲလိုက်တဲ့အကြောင်းကို ပြောပြလာတဲ့ သရုပ်ဆောင်အေငြိမ်းဖြူ သရုပ်ဆောင်အေငြိမ်းဖြူကတော့ချောမောလှပပြီးသရုပ်ဆောင်မှုတွေမှာပီပြင်တာ.ကြောင့်ပရိတ်သတ်တွေ.ရဲ့အားပေးမှုကိူအခိုင်အမာရရှိထားတဲ့မင်းသမီးပဲဖြစ်ပါ.တယ်၊အေငြိမ်းဖြူကမကြာခဏ.ဆိုသလိုသုမတတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေအလှူအတန်းတွေလဲပြုလုပ်တတ်သေး.ပါတယ်၊သူမကတော်လှန်ရေးကြီးမှာလဲပြည်သူတွေနဲ့.အတူအမှန်တရားဘက်က.ပါဝင်ပြီးလမ်းထွက်ကာလူထု.လှုပ်ရှားမှုတွေမှာလဲအားတက်သရော .ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ အေငြိမ်းဖြူကတော့အဆိုတော်ရဲရင့်အောင်ရဲ့ချစ်သူဆိုတာကိုပရိတ်သတ်ကြီးတွေကသိပြီး.သားပဲဖြစ်မှာပါနော်၊ဒီကနေ့မှာဆိုရင်Aငြိမ်းဖြူ.ကတော့လေးနှစ်ကျော်တွဲလာပီးmမှလမ်းခွဲnလိုက်ရတဲ့အကြောင်းကိုစိတ်မကောင်း၊.ဝမ်းနည်းစွာနဲ့ကိုပြောပြလာခဲ့ပါတယ်နော်။အေငြိမ်းဖြူကသေ.လောက်အောင်ချစ်ခဲ့ရတဲ့သူမို့.လမ်းခွဲတဲ့.အချိန်မှာလဲသေလောက်အောင်နာ.ကျင်ရပါ.တယ်၊Aသူ့ကိုဘယ်လောက်နာကျည်းနေပါစေ.၊ဒါပေမဲ့Aတို့နှစ်ယောက်ကို.အခြားသူတွေအမြင်မှာ. ကောင်းသောအမှတ်တရလေးတွေနဲ့.ပဲကျန်ခဲ့စေချင်လို့ပါ။ သရုပ်ဆောင်အေငြိမ်းဖြူကတော့ချောမောလှပပြီးသရုပ်ဆောင်မှုတွေမှာပီပြင်တာ.ကြောင့်ပရိတ်သတ်တွေ.ရဲ့အားပေးမှုကိူအခိုင်အမာရရှိထားတဲ့မင်းသမီးပဲဖြစ်ပါ.တယ်၊အေငြိမ်းဖြူကမကြာခဏ.ဆိုသလိုသုမတတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေအလှူအတန်းတွေလဲပြုလုပ်တတ်သေး.ပါတယ်၊သူမကတော်လှန်ရေးကြီးမှာလဲပြည်သူတွေနဲ့.အတူအမှန်တရားဘက်က.ပါဝင်ပြီးလမ်းထွက်ကာလူထု.လှုပ်ရှားမှုတွေမှာလဲအားတက်သရော .ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ အေငြိမ်းဖြူကတော့အဆိုတော်ရဲရင့်အောင်ရဲ့ချစ်သူဆိုတာကိုပရိတ်သတ်ကြီးတွေကသိပြီး.သားပဲဖြစ်မှာပါနော်၊ဒီကနေ့မှာဆိုရင်Aငြိမ်းဖြူ.ကတော့လေးနှစ်ကျော်တွဲလာပီးmမှလမ်းခွဲnလိုက်ရတဲ့အကြောင်းကိုစိတ်မကောင်း၊.ဝမ်းနည်းစွာနဲ့ကိုပြောပြလာခဲ့ပါတယ်နော်။အေငြိမ်းဖြူကသေ.လောက်အောင်ချစ်ခဲ့ရတဲ့သူမို့.လမ်းခွဲတဲ့.အချိန်မှာလဲသေလောက်အောင်နာ.ကျင်ရပါ.တယ်၊Aသူ့ကိုဘယ်လောက်နာကျည်းနေပါစေ.၊ဒါပေမဲ့Aတို့နှစ်ယောက်ကို.အခြားသူတွေအမြင်မှာ. ကောင်းသောအမှတ်တရလေးတွေနဲ့.ပဲကျန်ခဲ့စေချင်လို့ပါ။ အဲ့ကြောင့်Aဒီ.လမ်းခွဲတဲ့ကိစ္စနဲ့ပက်သက်ပြီး.နောက်ထပ်ဘာမှထပ်ပြောတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးနော်၊​.လေးနှစ်ကျော်လုံး.ဘယ်တော့မှလွှတ်မချ နိုင်ခဲ့ပဲမရရအောင်ဆုပ်ကိုင်ခဲ့တဲ့လက်တစ်စုံနောက်ဆုံးတော့လွှတ်ချနိုင်ခဲ့ပါပြီ၊အခြား.သူအတွက်ပေးဆပ်ရင်းကိုယ့်အ.တွက်ကိုယ်အ.သက်ရှုဖို့တောင်မေ့နေခဲ့တဲ့သူမို့ရှေ့ဆက်ရ.မဲ့ဘဝမှာကိုယ့်ကိုကိုယ်အများကြီးပြန်ကြည့်ပေးပြီးကြိုးစားနေထိုင်သွားမှာပါ။ဒီကာလကြီးမှာဒီလိုကိစ္စမျိုးအသိပေး.ရတဲ့အတွက်လည်းတကယ်တောင်းပန်ပါတယ်ဆိုပြီး.ဝမ်းနည်းစွာnရေးသားဖော်ပြလာပါတယ်။ CREDIT UNICODE သူမသလေောကျအောငျခဈြရတဲ့ ရညျးစားဟောငျး အဆိုတျောရဲရငျ့အောငျနဲ့ လမျးခှဲလိုကျတဲ့အကွောငျးကို ပွောပွလာတဲ့ သရုပျဆောငျအငွေိမျးဖွူ သရုပျဆောငျအငွေိမျးဖွူကတော့ခြောမောလှပပွီးသရုပျဆောငျမှုတှမှောပီပွငျတာ.ကွောငျ့ပရိတျသတျတှေ.ရဲ့အားပေးမှုကိူအခိုငျအမာရရှိထားတဲ့မငျးသမီးပဲဖွဈပါ.တယျ၊အငွေိမျးဖွူကမကွာခဏ.ဆိုသလိုသုမတတျနိုငျတဲ့ဘကျကနအေလှူအတနျးတှလေဲပွုလုပျတတျသေး.ပါတယျ၊သူမကတျောလှနျရေးကွီးမှာလဲပွညျသူတှနေဲ့.အတူအမှနျတရားဘကျက.ပါဝငျပွီးလမျးထှကျကာလူထု.လှုပျရှားမှုတှမှောလဲအားတကျသရော .ပါဝငျခဲ့ပါတယျ။ အငွေိမျးဖွူကတော့အဆိုတျောရဲရငျ့အောငျရဲ့ခဈြသူဆိုတာကိုပရိတျသတျကွီးတှကေသိပွီး.သားပဲဖွဈမှာပါနျော၊ဒီကနမှေ့ာဆိုရငျAငွိမျးဖွူ.ကတော့လေးနှဈကြျောတှဲလာပီးmမှလမျးခှဲnလိုကျရတဲ့အကွောငျးကိုစိတျမကောငျး၊.ဝမျးနညျးစှာနဲ့ကိုပွောပွလာခဲ့ပါတယျနျော။အငွေိမျးဖွူကသေ.လောကျအောငျခဈြခဲ့ရတဲ့သူမို့.လမျးခှဲတဲ့.အခြိနျမှာလဲသလေောကျအောငျနာ.ကငျြရပါ.တယျ၊Aသူ့ကိုဘယျလောကျနာကညျြးနပေါစေ.၊ဒါပမေဲ့Aတို့နှဈယောကျကို.အခွားသူတှအေမွငျမှာ. ကောငျးသောအမှတျတရလေးတှနေဲ့.ပဲကနျြခဲ့စခေငျြလို့ပါ။
ကစားသမားဘဝကနေ အနားယူပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပြန်လည်အခြေချနေထိုင်တော့မယ့် အောင်လအန်ဆန်း
ကစားသမားဘဝကနေ အနားယူပြီးရင် မြန်မာနိုင်ငံမှာ GYM တွေ တည်ဆောက်ပြီးပြန်လည်အခြေချနေထိုင်မယ့် စိတ်ကူးကို ပြန်စဉ်စားရတော့မယ်လို့ ဆိုလာတဲ့ အောင်လအန်ဆန်း အောင်လအန်ဆန်ရဲ့ ကမ်ဘာ့အဆင့်မီ Python MMA gym ရန်ကုန်မှာတစ်ခု ကချင်ပြည်နယ်မှာတစ်ခု ဖွင့်ထားပြီနော်။အောင်လအန်ဆန်ဟာ ရန်ကုန်မှာ Python MMA ဆိုတဲ့အမည်နဲ့လည်း ကမ္ဘာ့အဆင့်မီ Gym တစ်ခုကို တည်ဆောက်ထားတာ ကြာပါပြီ။ ၂
ချစ်သူသက်တမ်း (၄) နှစ်ပြည့်နေ့မှာ စုံတွဲပုံလေးတွေကိုချပြလာတဲ့သရုပ်ဆောင် မေ
သူမရဲ့ ချစ်သူလေးကို ချစ်သူသက်တမ်း (၄) နှစ်ပြည့်နေ့မှာ စုံတွဲပုံလေးတွေကိုချပြလာတဲ့ အဆိုတော်သရုပ်ဆောင် မေ ပရိတ်သတ်ကြီးရေ မေ ကတော့ အဆိုတော် သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက် အနေနဲ့ ပရိသတ်တွေ အားပေး ချစ်ခင်နေတဲ့ သူတစ်ယောက်ပါ။ ချိုသာတဲ့ အသံနဲ့ သီချင်းတွေကို ပိုင်ပိုင် နိုင်နိုင် သီဆိုနိုင်တာကြောင့် ပုရိသတွေရဲ့ အားပေးဝန်းရံမှုကို အပြည့်အဝရ ရှိပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အပြင်
မကြာခင် အချိန်ကျလာတော့မှာမို့ စစ်သားတွေကို ဒီရက်ပိုင်းလေးအတွင်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်တဲ့ သရုပ်ဆောင်ဒေါင်း
မကြာခင် အချိန်ကျလာတော့မှာမို့ စစ်သားတွေကို ဒီရက်ပိုင်းလေးအတွင်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်တဲ့ သရုပ်ဆောင်ဒေါင်း သရုပ်ဆောင်ဒေါင်းကတော့အမို.က်စားသရုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့အတူကျရာဇာတ်ကောင်တွေမှာအကောင်းဆုံးသရုပ်ဆောင်နိုင်တာကြောင့်ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုကိုအခိုင်အမာရရှိထားတဲ့မင်းသားချောပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါင်းကတော့အောင်မြင်မှုတွေရရှိထားတဲ့အပြင်စိတ်ထားကောင်းပြီးအလှူအတန်းမှာလဲ ရက်ရက်ရောရောရှိတာကြောင့်ပရိတ်သတ်တွေကပိုပြီးချစ်ခင်အားပေးနေရပါတယ်နော်။ ဒေါင်းကတော်လှန်ရေးကြီးမှာလဲပြည်သူတွေနဲ့အတူအမှန်တရားဘက်ကတစ်သားတည်းပါဝင်ခဲ့ပြီးလမ်းထွက်ကာလူထုလှုပ်ရှားမှုတွေမှာအားတက်သရောပါဝင်ခဲ့တာကြောင့်ပုဒ်မ၅၀၅ဖြင့်မတရားအမှုဖွ.င့်ထားခြင်းခံရပြီးဘေးကင်းရာကို ရှောင်တိမ်းနေရပါတယ်။ ဒေါင်းကတော့အောင်မြင်မှုတွေရရှိထားတဲ့အပြင်စိတ်ထားကောင်းပြီးအလှူအတန်းမှာလဲ ရက်ရက်ရောရောရှိတာကြောင့်ပရိတ်သတ်တွေကပိုပြီးချစ်ခင်အားပေးနေရပါတယ်နော်။ ဒေါင်းကတော်လှန်ရေးကြီးမှာလဲပြည်သူတွေနဲ့အတူအမှန်တရားဘက်ကတစ်သားတည်းပါဝင်ခဲ့ပြီးလမ်းထွက်ကာလူထုလှုပ်ရှားမှုတွေမှာအားတက်သရောပါဝင်ခဲ့တာကြောင့်ပုဒ်မ၅၀၅ဖြင့်မတရားအမှုဖွ.င့်ထားခြင်းခံရပြီးဘေးကင်းရာကို ရှောင်တိမ်းနေရပါတယ်။အခုတစ်ခါမှာဆိုရင်သရုပ်ဆောင်ဒေါင်းကစစ်သားတွေအနေနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အမှန်ကိုချနိုင်ဖို့အခုလိုပြောကြားလာခဲ့ပါတယ်နော်။ ဒေါင်းကတော့လက်ရှိအချိန်မှာပြည်သူတွေအားလုံးလက်ချင်းချိတ်မိနေကြပြီ၊ တံတိုင်းကြီးတစ်ခုထဲမှာပဲရှိနေကြတဲ့စစ်သားတွေတကယ်အပြင်မှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ခံစားချက်အမှန်တရားတွေကိုမမြင်ဘူးဆိုရင်တောင်တံခါးလေးတော့ဖွင့်ပြီးကြည့်ပါ။ ကြည့်ပြီးရင်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါ။ဒေါင်းကတော်လှန်ရေးကြီးမှာလဲပြည်သူတွေနဲ့အတူအမှန်တရားဘက်ကတစ်သားတည်းပါဝင်ခဲ့ပြီးလမ်းထွက်ကာလူထုလှုပ်ရှားမှုတွေမှာအားတက်သရောပါဝင်ခဲ့တာကြောင့်ပုဒ်မ၅၀၅ဖြင့်မတရားအမှုဖွ.င့်ထားခြင်းခံရပြီးဘေးကင်းရာကို ရှောင်တိမ်းနေရပါတယ်။ အခုတစ်ခါမှာဆိုရင်သရုပ်ဆောင်ဒေါင်းကစစ်သားတွေအနေနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အမှန်ကိုချနိုင်ဖို့အခုလိုပြောကြားလာခဲ့ပါတယ်နော်။ ဒေါင်းကတော့လက်ရှိအချိန်မှာပြည်သူတွေအားလုံးလက်ချင်းချိတ်မိနေကြပြီ၊ တံတိုင်းကြီးတစ်ခုထဲမှာပဲရှိနေကြတဲ့စစ်သားတွေတကယ်အပြင်မှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ခံစားချက်အမှန်တရားတွေကိုမမြင်ဘူးဆိုရင်တောင်တံခါးလေးတော့ဖွင့်ပြီးကြည့်ပါ။ ကြည့်ပြီးရင်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါ။ ဘာလို့လဲဆိုရင်ဆုံးဖြတ်ဖို့ကအချိန်တွေကျဉ်းလာပြီအများကြီးမကျန်တော့တဲ့အတွက်ဒီရက်ပိုင်းလေးနဲ့မဆုံးဖြတ်နိုင်ရင်အများကြီးပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကျရင်ဆုံးဖြတ်လို့မရတော့ဘူး။ နောက်ကျသွားမှာကိုစိုးရိမ်တယ်ဆိုပြီးတော့ရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ စာဖတ်သူအပေါင်း ကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ
Celebrity Corner | 30/08/2021
နွေဦးတော်လှန်ရေးရန်ပုံငွေ အတွက် သိန်းရာနဲ့ချီပြီး ရှာဖွေပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ တေးရေး/တေးဆို ဆောင်းဦးလှိုင်
တကိုယ်တော် Show မှ နွေဦးတော်လှန်ရေးရန်ပုံငွေ အတွက် သိန်းရာနဲ့ချီပြီးရှာဖွေပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ တေးရေး/တေးဆို ဆောင်းဦးလှိုင်… အဆိုတော်ဆောင်းဦးလှိုင်ကတော့သီချင်းကောင်းတွေကိုပရိသတ်ရင်ထဲရောက်အောင်သီဆိုနိုင်သူတစ်ယောက်ပါ။ ဆောင်းဦးလှိုင်က ကိုယ်ပိုင်အမ်ဘမ်များစွာထွက်ရှိခဲ့ပြီးအောင်မြင်ခဲ့တာဘဲဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာဆောင်းဦးလှိုင်က နိုင်ငံခြားမှာရောက်နေပေမယ့်စစ်အာဏာရှင်ကိုတော်လှန်တဲ့နွေဦးတော်လှန်ရေးကြီးမှာတတ်တတ်ကြွကြွပါဝင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါအပြင်ဆောင်းဦးလှိုင်ကနွေဦးတော်လှန်ရေးအတွက်ရန်ပုံငွေရရှိရန်အမေရိကန်နိုင်ငံအနှံ့ တစ်ကိုယ်တော်ဖျောဖြေပွဲတွေပြုလုပ်ပေးနေတာဘဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆောင်းဦးလှိုင်ကပထမဦးဆုံးဖျော်ဖြေပွဲကနေရန်ပုံငွေအများအပြားရရှိခဲ့ကြောင်းဝမ်းသာစွာပြောပြလာပါတယ်။ Boston ပွဲပြီးဆုံး Albany NYသို့ရောက်ရှိBoston ပွဲမြှာ မို့ခံတွေမျှော်လင့်ထားတဲ့$ 20000 ထက်ပိုတဲ့ရံပုံငွေကိုရှာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်တစ်ယောက်တည်းကြောင့်မဟုတ်ပါဘူး။ အားလုံးကြိုးစားခဲ့ကြလို့ပါ။ အသေးစိတ်ကိုနောက်တော့ထပ်မံတင်ပြပေးပါ့မယ်။ အခု
အမှန်တရားဘက်ကရပ်တည်ခဲ့တဲ့ လူငယ်တွေအတွက် ခွန်းအားဖြစ်စေမယ့် စကားလေးပြောလာတဲ့ မင်းသမီးချော အိန္ဒြာကျော်ဇင်
အမွန္တရားဘက္ကရပ္တည္ခဲ့တဲ့ လူငယ်တြေအတြက် ခြန်းအာျးဖစ်စေမယ့် စကားလေျးေပာလာတဲ့ မင်းသမီးခေ်ာ အျိန္ဒာကေ်္ဇာင် သရုပ်ဆောင်အိန္ဒြာကျော်ဇင် ကတော့ အမိုက်စား သရုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့အတူ ကျရာဇာတ်ကောင်တွေမှာ အကောင်းဆုံး သရုပ်ဆောင်နိုင်တာကြောင့်ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင်အားပေးမှုကိုအခိုင်အမာရရှိထားတဲ့ အကယ်ဒမီမင်းသမီးကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ အိန္ဒြာကျော်ဇင်ကတော့ အရမ်းချစ်တတ် တဲ့ခင်ပွန်းဖြစ်သူသရုပ်ဆောင်အကယ်ဒမီ​ပြေတီးဦးနဲ့ချစ်စရာကောင်းကြတဲ့သားသားနဲ့မီးမီး၂ယောက်ကိုလဲပိုင်ဆိုင်ထားပြီးသာယာအေးချမ်းတဲ့မိသားစုလေးကိုတည်ဆောက်ထားပါတယ်နော်။ အိန္ဒြာကျော်ဇင်ကတော့ တော်လှန်ရေးကြီးမှာလဲပြည်သူတွေနဲ့အတူ လမ်းထွက်ကာလူထုလှုပ်ရှားမှုတွေမှာ အားတက်သရောပါဝင်ခဲ့တာကြောင့် ပုဒ်မ၅၀၅ကနဲ့အမှုဖွင့်ခံရထားပြီးသရုပ်ဆောင်ပြေတီဦးနဲ့အတူနေအိမ်မှာပဲမတရားအဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံလိုက်ရပါတယ်နော်။အိန္ဒြာကျော်ဇင်အဖမ်းခံ လိုက်ရတာ​ကြောင့်မိသားစုများနဲ့ပရိတ်သတ်များကစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်၊သရုပ်ဆောင်အိန္ဒြာကျော်ဇင်ကလူငယ်များအတွက်ခွန်အားဖြစ်စေမယ့်စာသားတွေပြောပြခဲ့ပါတယ်။ အိန္ဒြာကျော်ဇင်က အမလူငယ်တွေကိုအကြံပေးချင်တာက အောင်မြင်ဖို့ဆိုတာဇွဲလုံးလဝီရိယရှိရမယ်၊မဖြစ်ဖြစ်အောင် လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ကြိုးစားချင်စိတ်လည်းရှိရမယ်၊အခက်အခဲဆိုတာတော့နေရာတိုင်းမှာရှိမှာပဲလေ
အသည်းအသန်အားပေးခဲ့တဲ့ မန်ယူအသင်းကို စီရိုနယ်ဒိုပြန်လည်ရောက်လာတော့မယ့်အချိန်မှာ မရှိတော့တဲ့ ရေမွန်နဲ့ ညီညီအောင်ထက်နိုင်တို့ကို သတိရနေတဲ့ နွေဦးညီအကိုများ…
အသည်းအသန်အားပေးခဲ့တဲ့ မန်ယူအသင်းကို စီရိုနယ်ဒိုပြန်လည်ရောက်လာတော့မယ့်အချိန်မှာ မရှိတော့တဲ့ ရေမွန်နဲ့ ညီညီအောင်ထက်နိုင်တို့ကို သတိရနေတဲ့ နွေဦးညီအကိုများ… မနေ့ညက Premier League ဘောလုံးလောကမှာ အပြောင်းအလဲတစ်ခု ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါကတော့ ကမ္ဘာကျော်ဘောလုံးကစားသမား စီရော်နယ်ဒိုဟာ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းသို့ ပြောင်းရွှေ့ကြေး ယူရို(၂၈) သန်းဖြင့်သဘောတူညီမှုရရှိသွားခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ရော်နယ်ဒိုဟာ မန်ယူမှ စိတ်ဝင်စားကြောင်း သိရှိသွားတာကြောင့် မန်စီးတီးအသင်းမှ ခေါ်ယူမှုကို ချက်ချင်း
ကမ်းခြေမှာ သာသာယာယာ Tiktok ဆေ့ပြီး ပျော်ပါးနေတဲ့ သရုပ်ဆောင် ခင်ဇာခြည်ကျော်
ကမ်းခြေမှာ သာသာယာယာနဲ့ Tiktok ဆော့နေတဲ့ဗီဒီယိုတွေတင်လိုက်လို့ ဝေဖန်မှုတွေမြင့်တတ်နေတဲ့ ခင်ဇာခြည်ကျော် မင်းသမီးခင်ဇာခြည်ကျော်ကတော့ အနုပညာလမ်းကြောင်းပေါ်မှာဆယ်နှစ်ကျော်တိုင်အောင် လျှောက်လှမ်းနေခဲ့ပြီး ပရိသတ်တွေရဲ့ရင်ထဲမှာ အချစ်တွေကိုရယူထားနိုင်ခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမကတော့ ပိုင်နိုင်လှတဲ့သရုပ်ဆောင်ချက်တွေကြောင့် အကယ်ဒမီဆုတွေကိုလည်း ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီး ခုချိန်မှာတော့အနုပညာအလုပ်တွေကို ရပ်နားထားပြီး သားနဲ့သမီးချောလေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီး အေးချမ်းတဲ့မိသားစုဘဝလေးမှာ ပျော်နေသူပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့ သားနဲ့သမီးတော့ မိခင်ဖြစ်သူနဲ့အတူ မောင်နှမတွေလိုပဲ ပေါင်းသင်းနေတာကြောင့် အင်တာဗျူးတွေမှာဆိုရင်လည်း ပျော်ရွင်စွာဖြေတတ်ကြတာကြောင့်
ပရိတ်သတ်တွေ သိချင်နေကြတဲ့ သူမရဲ့ ချစ်သူကောင်လေးကို တရားဝင် ထုတ်ပြလိုက်တဲ့ မော်ဒယ် စုလှိုင်ဝင်း
သမီးလေးကို သူမနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီး ရုပ်ရည်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဝေဖန်ခံရလို့ မိခင်တယောက်အနေနဲ့ စိတ်မကောင်းဘူးဆိုတဲ့ ခိုင်သင်းကြည်